पुष २२, २०७७ सन्ध्या पौडेल
वि.सं. २०१५ साल असार १५ गते विराटनगर कञ्चनबारी निवासी स्व.बुवा केदारनाथ गुरागाई तथा स्व.आमा भवानी देवी गुरागाईको कोखबाट २ दिदीबहिनी र ५ दाजुभाइ मध्येकी छैटौ सन्तानको रुपमा भिमाको जन्म भएको हो । शिक्षित र सम्पन्न परिवारमा जन्मिएकी यादवको बाल्यवस्था सुखमय बितेको उनले बताइन ।उनी आमाबुवाकै सहयोगबाट वि.सं.२०३० सालमा बनारस ब्रम्ह्घाट गणेश विद्या मन्दिर विद्यालयबाट एस.एल.सी गरेको बताइन । साथै अध्ययनकै क्रममा बनारस ब्रम्ह्घाट बल्लभ विद्यापिठ विद्यालयबाट वि.कम गरे लगतै उनी २५ वर्षको हुदाँ वि.सं. २०४० सालमा इटियाही बारा जिल्ला निवासी जनस्वास्थ्यमा कार्यरत राम प्रसाद यादवसंग विवाह वंधनमा बाधिन पुगिन । यिनको दाम्पत्य जिवनबाट ३ छोरी १ छोराको जन्म भई लालनपोषण गर्दै आफु राजनीतितिर होमिएको बताइन । साथै वि.सं. २०४७ सालमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रिय सदस्यमा मनोनित भएकी थिइन । राजनीतिक गर्ने क्रममा उतार–चढाव आएता पनी आफनो पाइला पछाडी नहटेको बताइन । साथै गएको प्रदेश स्तरीय चुनावमा (संघिय समाजवादी फोरम नेपाल) जनता समाजवादी पार्टी नेपालमा पार्टी प्रवेश गरी समानुपातिकमा २ नं. प्रदेशको प्रदेश सभा सदस्यमा मनोनित भईन । हाल वीरगंज महानगरपालिका भगवती टोल वाड नं.४ मा आफनै निवासमा बसोबास गर्दै आइरहेकी छिन । तिनै २ नं. प्रदेशको विकास र कसरी समृद्ध बनाउने भन्ने राजनीतिक विषयको सेरोफेरोमा रहेर २ नं. प्रदेशको प्रदेश सभा सदस्य श्रीमती भिमा यादवसंग मध्य नेपाल सन्देशले गरेको कुराकानी ः
१) संघीयताको तीन वर्ष पूरा भईसकेको छ । प्रदेश सरकार गठन भईसकेपछिको यो अवधी कस्तो रहयो ? बीस वर्ष सम्म सरकार नभएकोले एउटा खालीपना थियो ।
बीस वर्ष पछि संघीयता आयो । त्यसलाई बुझ्नमै केही समय व्यतित भयो । बिस्तारै नीति नियमहरु बन्दै गए । कार्यको बाँडफाड हुदै गयो । पछिल्लो समयमा आफूले गरेका बाचाहरु पूरा गर्न केही हदसम्म सक्षम भएको छु ।
२) यो तीन वर्षमा तपाईले गर्नुभएका मुख्य कामहरु के के हुन ?
मैले धेरै कामहरु पूरा गरेको छु । मेरो एक करोडको बजेटबाट मैले महिला सशक्तिकरण गर्ने र महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले व्यूटिसियनका ट्रेनिङ्गको व्यवस्था, सिलाई कटाईका तालिमको व्यवस्था, सिलाई मेसिन वितरण गरे, महिला संचरकर्मीहरुका लागि एक थान कम्यूटर सेट, दश कक्षा पास भएका र उच्च अध्ययनका लागि घरबाट टाढा जानुपर्ने ३५ जना किशोरीहरुका लागि साईकल वितरण गरे, नाला र सडकमा केही रकम खर्च गरे, एउटा विद्यालयमा विद्यार्थीहरुकै मागमा सरसवती माताको मन्दीर स्थापना गरे । धाराहरु वितरण गरेको छु ।
३) जनताको चाहाना अनुशार काम हुन सकेन भन्ने जनगुनासो छ नि ?
धेरै दुख गरेर यो संघीयता ल्याईयो । तर म यतिका वर्ष अभिभावकविहिन वालवच्चाहरु जस्तै मान्छे छाडा तन्त्रमा गईसकेका थिए । अंकुश लगाउने मान्छे र सही दिशा निर्देशन गर्ने मान्छेको कमी भएको हो । देशमा संघीयता आएर नीति र संरचना नयाँ भएपनि पहिलाको जमाना जस्तै महिलालाई प्रताडित गर्ने पछि पार्ने सोच पुरानै छ । हामीलाई केन्द्र सरकारले कलम त दिएको छ तर त्यसमा हाल्ने मसी नै दिएको छैन् । मसी नभएको कलमको के काम भयो र ? गर्न नचाहेको होईन तर सही निर्देशननै नभएर हो । एकअर्कामा दोषरोपण गर्ने बानीले पनि हामीलाई पछि पारेको हो ।
४ हाल सम्म पनि प्रदेश सरकारले प्रदेशको नामाकरणगर्न नसक्नुको कारण के हो ?
अन्य प्रदेशले त नाम राखेका छन् तर कस्तो नाम राखे ? वागमती प्रदेश कर्णली प्रदेश अब हामीले नारायाणी प्रदेश राख्नु त भएननी । हामीले सोची रहेका छौ । हत्तारमा निर्णय लिनु उचित हुँदैन । यो कार्यकाल भित्र अवश्य प्रदेशको नामाकरण हुन्छ ।
५) स्थानीय पालीकाहरुसंगको समन्वय कस्तो छ ?
यसरी मेरो पालिका स्तरमा कुनै किसीमको समन्वय छैन । आवश्यक परेको ठाउँमा त्यहाँका स्थानीयहरुले राम्रो सहयोग गर्नु हुन्छ तर अन्य पालिका होस वा वीरगंज महानगरपालिका कसैसंग मेरो कुनै किसीमको समन्वय भएको छैन् ।
६) महिला भएर काम गर्दा कत्तिको चुनौति छ ?
हामीलाईत संगठनमै समस्या छ । एक त महिला त्यो पनि मधेशी मूलको निकै गाह्रो छ । अवसर दिदैनन् । दश पुरुष भएको स्थानमा ३ महिला राख्नुस भन्दा नराख्ने एकलौटी प्रवृत्ति अझै पनि छ । जति सुकै समानता र समावेशिताको कुरा गरे पनि कागज र भाषणमा मात्रै सिमित छन् । हाम्रै प्रदेश सभाको संसदिय समितिको ७ वटा समितिमा पनि २ महिला आवश्यक हुन्छ तर महिला नै छैनन् । महिला तथा वालवालिका शाखामा पनि पुरुषनै छन् । चुनौतिबाटै सिकेर खारिने हो । त्यसैले हामीले हिम्मत हारेका छैनौ । अघि बढेका छौ ।
७) तपाईले गर्नु भएको कामबाट तपाई स्वयम कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
मैले आफूलाई ग्लानी महसुस गर्ने कुनैपनि ठाउँ छैन । किनभने मेरो कोषमा जति बजेट आएको छ त्यसको सदुपयोग सही तरिकाले गरेको छु । मैले धर्मशाला निमार्ण गदै छु । गरिव परिवारका चेलीबेटीको विवाह व्रतवन्ध लगायतका शुभकार्यमा सहज होस् भनेर उक्त धर्मशालाको निमार्ण गरिएको हो । मैले मेरो कोषमा आएको बजेटबाट सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु गरेकी छु । र आगामी दिनमा पनि गर्छु । कहि कतैबाट साथ सहयोग नपाएर पनि मैले आफूले नै कामहरु गरिरहेका हु । मेरो सिमित बजेटमा पनि धेरै काम गरेको हुनाले म आफ्नो कामबाट पूर्ण सन्तुष्ट छु ।
८) अगाडि बढेका विकास निमार्णका कार्यक्रमहरु के हुन ? अब कुन कुन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिदै हुनुहुन्छ ?
एउटा त मैले मेरो लगानीमा धर्मशाला बनाउँदै छु । ३ वर्ष बितिसकेको छ । २ वर्ष बाँकी छ । मैले मन्त्री ज्यूहरुसंग कुरा राखेको छु । यहाँहरुको सहयोग रहयो भने जनताको सुविधाअनुशारको काम गर्ने कार्ययोजना बनाईरहेको छु ।
#मसी विनाको कलम
बुधवार, पुष २२, २०७७, १०:०१:००
पुस महिना २९ को मात्रै, दाहाल नेपाल समूहले ३० गते विरोध कार्यक्रम गर्ने !
भारतको सहयोगले राजावादीहरु उफ्रदैछन् : मोहन विक्रम साह
प्रम ओली र राष्ट्रपतिले गरेको संसद विघठनको निर्णयलाई मधेशका नेताहरु के भन्छन् यस्तो छ प्रतिक्रिया :
पुष १४, २०७७ सन्ध्या पौडेल
हवाई खुल्ला, घोषित रुपमा सिमानाका बन्दहुदाँ स्थानीय मर्कामा तराईमा आन्दोलनको अभ्यास हुदैँ
पुष २, २०७७ सन्ध्या पौडेल